मुख बिगार्नेको पछि को लाग्छ र ? | नेपालको सम्झना
Browse » Home » कुराकानी » मुख बिगार्नेको पछि को लाग्छ र ?
मुख बिगार्नेको पछि को लाग्छ र ?
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारित हास्य टेलिश्रृंखला ‘ट्वाक्क-टुक्क’बाट पहिचान बनाएका जितु नेपाल हास्य अभिनेताको रुपमा स्थापित भइसकेका छन् । दर्जनभन्दा बढी नेपाली चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका उनले अहिले ‘जिरे खुर्सानी’ नामक हाँस्य टेलिश्रृंखलामार्फत दर्शकलाई हसाई रहेका छन् । दिनेश डि.सी र सन्तोष पन्तको प्रभावबाट कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका जितु पछिल्लो समय दमन रुपाखेतीसंगको जोडी तोडेर ‘जिरे खुर्सानी’मा शिवहरि पौड्यालसँग अभियनमा जमेका छन् ।
पछिल्लो समय बेलायत गएका नेपाली बिद्यार्थीको दुःख पिरबारे देखाइरहेका जीतुसंग काठमाण्डौंमा गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
० जिरे खुर्सानीमा एसएलसी पास गर्नु भा’छ, साँच्चिको चाहीँ कति पढनु भा को हो ?
- आई. ए पास छु ।
० विदेश पनि जानु भो साँच्चिकै दुःख पाउने रहेछन् त नेपालीले ?
- धेरै जसोले दुःख पाएको देखियो । आफन्त नहुने र पैसा कम बोकेर जानेले दुःख पाएका छन् । वास्तवमा विदेशको रियालिटी बुझेर मात्र उता जानु पर्ने रहेछ ।
० राज्यको राम्रो नीति नभएर नेपाली विदेशीएका हुन ?
- देशको अवस्था यस्तो छ, विदेश नगएर के गर्ने । राज्यले नै यता केही राम्रो नीति ल्याए त को विदेश जान्थ्यो र ?
० पर्दामा त खुव लभ गर्दै हिडनु हुन्छ, रियल लाईभमा कतिको केटी घुमाइयो त ?
- त्यस्तो घुमाइएन । विहे पनि एरेञ्ज नै गरियो । त्यस्तो अवस्थै आएन ।
० कलाकारहरको पछि लाग्ने त हुन्छन नि ?
- मुख विगारेर हँसाउने पछि को पो लाग्छन र ?
० मुख विगारेर मात्र हँसाउनु राम्रो हो र ?
- त्यो त परिस्थिति अनुसार हुन्छन् । कसैले मुख विगारेको मन पराउँछन, कसैले अरु नै ।
० जोडी टुट्दा र जम्दाको असर कस्तो पर्‍यो ?
- जोडी जमेको राम्रो हो । टुट्दा पनि आपसी सहमतीमा नै भएको हो । दमनजी र मेरो अहिले पनि राम्रो सम्बन्ध छ । केही त्यस्तो छैन । हामीले आ-आˆनै तरिकाले काम गरेका छौं ।
० चलचित्रमा पनि अभिनय गर्नु भो, तर आज आजभोली किन देखिन छोडनु भो नि ?
- वास्तवमा मिल्ने खालको भुमिका नै पाईएन, फेरि पैसा पनि कम पाइने । पर्दा मात्र ठूलो, अरु सबै कुरा सानो ।
० हाँस्य कलाकारलाई जोकरको रुपमा बढी प्रयोग गर्ने भएर हो कि ?
- त्यो पनि हो । राम्रो भुमिका दिदैनन् । कमेडीयनलाई खासै प्राथमिकता दिएको देखिँ दैन् ।
० स्टेज शो, चलचित्र र टेलिभिजन रोज्नु पर्दा ?
- स्टेज शो र टेलिभिजन नै रोज्छु ।
० टेलिभिजन हाँस्य कार्यक्रम निकै फस्टाउँदो छ नि ?
- टेलिभिजन च्यानलहरुको बढ्दो संख्यासँगै हाँस्य श्रृंखलाहरु पनि बढिरहेका छन् । एकातर्फ आर्थिक स्थिति सुधारिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तर खस्केको पनि देखिन्छ । समग्रमा भन्दा राम्रा रहन्छन्, नराम्रा बढारिन्छन् ।
Posted by नेपालको सम्झना at 7:00 PM
0 comments to “मुख बिगार्नेको पछि को लाग्छ र ?”